गोविन्द केसीले अनसन घोषणा गरे लगत्तै स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको आयो कडा प्रतिक्रिया — Imandarmedia.com
गोविन्द केसीले अनसन घोषणा गरे लगत्तै स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको आयो कडा प्रतिक्रिया
काठमाडौँ। राज्यमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न अल्टिमेटम दिएकै दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले स्वास्थ्यकर्मीसँग प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन्। डा. गोविन्द केसीले राज्यमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न अल्टिमेटम दिएकै दिन राज्यमन्त्री श्रेष्ठले विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितामा संलग्नमाथि कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबारको बैठकमा छानविन समिति गठन गरेर कारवाही अघि बढाउने बताएका हुन्। उनले भने ‘विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विषयमा सरकारले छिट्टै सिनेट बैठक बोलाई छानविन समिति गठन गर्नेछ । छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा दोषीमाथि कडा कारवाही हुन्छ।
राज्यमन्त्री श्रेष्ठले जनस्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा खेलबाड गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारले मन्त्रालयमा छुट्टै अनुगमन इकाई बनाउन लागेको जानकारी गराए। सार्वजनिक महत्वको संस्थाहरूलाई जथाभावी गर्न नदिन अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्ने आश्वश्यकता औंल्याउँदै त्यसतर्फ सहयोग गर्न उनको आग्रह थियो।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले जनस्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द, हडताल गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कारवाही गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए।
समितिका सदस्य एवम् पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री खगराज अधिकारीले आन्दोलन गरेर प्रतिष्ठानलाई बन्द गराउने कर्मचारीमाथि कडा कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। भ्रष्टहरूले स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाहरूमा समेत जरो गाडेर बस्दा पनि सरकार गम्भीर नभएको उनको आरोप छ।
समितिका अर्का सदस्य एवम् पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिष्ठानका उपकूलपतिलाई दिइएको असीमित अधिकार तत्काल कटौती गर्न सरकारलाई सचेत गराए।
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि संघर्षरत डा. गोविन्द केसीले सरकार समक्ष विभिन्न पाँच बुँदे मागहरु अघि सारेर सत्याग्रह घोषणा गरेका छन्। माग पूरा नभए आगामी भदौ ३ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने उनको घोषणा छ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने उनको पहिलो माग छ। स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुने गरी राज्य मन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै उनले तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्ने बताएका छन्।
डा. केसीको मागपत्रमा भनिएको छ, हप्तौंसम्म स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त नभएको अवस्थामा निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएर सरकारले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै उल्टो र गलत बाटोमा डोर्याउने प्रयास गरेको छ। महामारीको यस्तो जटिल मोडमा कुशल र स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यक्तिलाई तत्काल स्वास्थ्यमन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुको विकल्प छैन।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शीर्ष चार पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने केसीको अर्को माग छ। प्रतिष्ठानमा डेढ महिनाभन्दा बढी चलेको आन्दोलनका मागहरू पूरा गर्नेबारे हालै भएको सम्झौता अक्षरसः कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा निकट भएर काम गरिरहेका केसीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठविरुद्ध सडकमा उत्रिएका हुन्। पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री श्रेष्ठकै कारण देउवा सरकारमा मन्त्री बन्नबाट बन्चित भएका हुन्। देउवाले आफै स्वास्थ्य मन्त्रालय राख्ने र श्रेष्ठलाई काम गर्न लगाएर आफै जस लिन खोजेका थिए।
अहिले कोभिड सरकारको मुख्य समस्या हो। यसलाई हल गर्नपर्छ। गगन थापा निकट श्रोतले भन्यो, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गगन आउँदा गगनले सिंगल जस लिन्छन, प्रधानमन्त्री देउवा ओझेल पर्ने भएर गगनलाई मन्त्री नबनाइएको हो।
त्यही भएर गगन थापा जसरी पनि स्वास्थ्य मन्त्री बन्न चाहेका छन् । त्यसका लागि स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई जसरी पनि कुसीबाट हटाउनु पर्यो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार श्रोतले भन्यो, त्यसका लागि उपयुक्त पात्र बनेका हुन् डा. गोविन्द केसी।
केसीको हरेक सत्याग्रहमा गगन थापाले साथ दिदै आएका छन्। डा. केसी पनि गगनका लागि चुनाव जिताउन चुनावी अभियानमा सहभागी भएर कपनका जनतासँग भोट मागेका थिए। त्यतिबेला केसी खुबै चर्चा भएको थियो।